बालिका बलात्कारको आरोपमा भक्तपुरका छुट्टाछुट्टै स्थानबाट दुईजना पक्राउ – Kanika Khabar
Kanika Khabar १२ असार २०७७, शुक्रबार ०७:१५ June 26, 2020 मा प्रकाशित
असार १२, भक्तपुर
भक्तपुरमा छुट्टाछुट्टै बलात्कार घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पीडितका आफन्तले दिएको जाहेरीका आधारमा दुई जनालाई पक्राउ गरिएको महानगरिय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक दिपक गिरीले जानकारी दिनुभयो । असार ४ गते दिउँसो १४ वर्षीया एक बालिकालाई ललाइफकाई प्रलोभनमा पारी काभ्रेपलान्चोक भुम्लु गाउँपालिका वडा नं. १ बस्ने २१ वर्षीय सोमराज परियारले जबरजस्ती करणी गरेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले परियारलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार उनले मध्यपुर ठिमी वडा नं. ९ को निलबाराही जंगलमा लगेर बालिकालाई बलात्कार गरेको उजुरी परेको थियो । पीडित बालिकाकी आमाले दिएको उजुरीका आधारमा परियारलाई ५ गते नै पक्राउ गरी जिल्ला अदालत भक्तपुरबाट १० दिनको म्याद थप गरिएको र अनुसन्धान भइरहेको गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
यसै गरी जेठ ३१ गते दिउँसोको समयमा १३ वर्षीया बालिकालाई आफ्नै कोठामा लगेर बलात्कार गरेको आरोपमा रुकुम भुमे गाउँपालिका वडा नं. ९ का ३५ वर्षीय जबर खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । खड्काले ती बालिकालाई प्रलोभनमा पारी चाँगुनारायण नगरपालिका १ दुवाकोट बेसीमा आफ्नै कोठामा लगेर बलात्कार गरेको भनी पीडित बालिकाकी हजुरआमाले उजुरी दिएको प्रहरीले जनाएको छ । हजुरआमाको उजुरीका आधारमा खड्कालाई असार ६ गते पक्राउ गरी भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट १० दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान थालिएको उपरीक्षक गिरीले जनाकारी दिनुभयो ।